ဆိုရင်အသုံးပြုတဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးသင့်မိုဘိုင်းမှန်မှန်၊အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်သတိထားမိတယ်ကိုယ့်အဘို့အကမည်သို့ခက်ခဲသင်နိုင်မှဝင်ရောက်ခွညမ်း။ ဤအတွက်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်အက္ပ္စတိုးကိုမကြိုက်ကြပါဘူးအရွယ်ရောက်-ဆက်စပ်သောစီမံကိန်းများကို၊နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ငြင်းပယ်သူတို့ကိုအဖြစ်မကြာမီသူတို့မှတဆင့်လာကြ၏။ ကျွန်တော်နှစ်သက်ဒီချဉ်းကပ်သောကြောင့်၊ကျနော်တို့အစစ်အမှန်ယုံကြည်ကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်×-သတ်မှတ်စီမံကိန်းမှထွက်ရှိသောအထိုက်အမောင်းထိုးနှင့်နိုင်မှအမှန်တကယ်ကိုဆက်ကပ်အဘယ်အကြောင်းအ punters။, အို၊ကျွန်တော်နည်းလမ်းတခုတွေ့ကြပြီဒီကြောက်မက်ဘွယ်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ယနေ့အချိန်တွင်၊ငါသည်သင်မည်သို့ပြောဖို့သွား၊သင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ကစားနိုင်ပါတယ်ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ၏မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာ။ ကျနော်တို့အပေါ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြရတယ်ဒီနည်းပညာကွန်ယက်အတွက်အတော်လေးအချိန်တချို့ကိုအခု၊ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာသွားဖို့အဆင်သင့်အသက်ရှင်နှင့်ကျွန်တော်မစောင့်ရဖို့တတ်နိုင်သမျှလူများစွာတံခါးကိုမှတစ်ဆင့်အတွက်ဦးတည်ခဲ့တာပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီးမိုဘိုင်းဂိမ်းများလိုအနက်ပြန်ဖွင့်ခြင်းအမျိုးအစားနဲ့သင်ပြသောအခါတွန်းလာဖို့တွန်းထိုး၊ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါသေးရှိသည်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသော XXX ဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံအပေါ်တစ်ဦးပေါ်တယ်။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူချင်?, ဖတ်အောက်ဖော်ပြပေးပါ့မယ်အားလုံး၏အရည်ရွှမ်းအပေါ်အသေးစိတ်အဘယ်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုန်း-အခြေခံ XXX ဂိမ္းခါႏွအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်။
အနည်းငယ်ရှိပါတယ်ဂိမ္းဝန်ဆောင်မှုများကိုထွက်ရှိသောချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသင့်ဖုန်းဖြင့်၊သို့သော်အကြီးမားဆုံးပြဿနာအားလုံးမှာအကြောင်းလက်လှမ်းကနေတဆင့်မိုဘိုင်းအရူပါ–မခံအားစနစ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးမိုဘိုင်းဂိမ်းများလိုတကယ်ပြန်ဖြစ်ဆိုလိုတယ်ဆိုတာဒီအာကာသတွင်အောင်မြင်ရန်နိုင်ရန်အကြောင်း၊ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကမယုံနိုင်လောက်အောင်ရိုးရိုးနှင့်လွယ်ကူသောအတွက်သင်ဝင်ရောက်ဖို့အကြောင်းရှိသည်သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ။ ဆိုလိုသည္မွာအားလုံးဂိမ်းများနှင့်အတူလာဖုန်း-ပထမဦးဆုံးနည္းပညာ–မရှိသောက်သုံးမကျ၊အဘယ်သူမျှမဒဏ်ဍာ။, အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်ရှာနေကြပါသည်တည်ထောင်ရန်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိနယ်ပယ်များ-ကိုအခြေခံေဖ်ာ္ေျဖေရး၊သာသေချာအောင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ထားပါတယ်များအတွက်၊သို့သော်အောင်မှတ်သောအရွယ်ရောက်ပြီးမိုဘိုင်းဂိမ်းများသည်တစ်ခုတည်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်၏အတွေ့အကြုံနှင့်အတူလူများလက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်။ ဆိုလိုသည္မွာအားလုံးဂိမ်းကျနော်တို့ကဖန်တီးပါပြီနိမ့်စနစ်လိုအပ်ချက်များသာလိုအပ်သောစွမ်းရည်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တစ်ဦးထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့်အရေးကြီးဆုံးရှိသမျှ၊အစွမ်းအပြေးမှတဆင့်။ ပြောကြရအောင်အနည်းငယ်ပိုပြီးအဘယ်ကြောင့်ကြောင်းဖွင့်ကဲ့သို့သောအရေးပါသည့်။
ကတည်းကကျွန်တော်တို့မသင်ပေးနိုင်ဖို့လက်လှမ်းအအက္ပ္ကိုလို့တားမြစ်ထားသောအားဖြင့်ကြီးမားကစားသမားတွေဂိမ်းအတွက်၊ကျွန်တော်တို့မယ့်အစားရွေးချယ်ဖို့ဆင်းသွားလမ်းများ၏ထောက်ပံ့ဖို့လက်လှမ်းအတူသင်တို့၏ဂိမ်းဒေတာဘေ့စမှတဆင့်သင်၏ဘယောက်ဆာ–တစ်စုံတစ်ခုသောအပလက်ဖောင်းသွားကြသည်မဟုတ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရ၏။ ဒါကအလုပ်လုပ်တယ်လမ်းဖြစ်ပါသည်သင်ရိုးရိုးချိတ်ဆက်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကို Chrome၊မြေခွေးမှာသို့မဟုတ်ဆာဖာ:အဆိုပါရွေးချယ်မှုသည်အမှန်တကယ်ရင်းသင့်ချင်ရာတစျခုအသုံးချရန်။ ပြီးတာနဲ့ပြုသောအမှုဖွင့်ကြောင်း၊ဒိန်းမတ်ဝန်တက်ဂိမ်း–အဘယ်သူမျှမကိစ္စရပ်များကိုသို့မဟုတ်ပြဿနာများ!, ဤအမှုကိုပြုသောသိရသည်နှင့်အတူထုတ်ဖော်ပြောဆိုရည်ရွယ်ချက်ရှိစေရန်သင်အားပေးရာက္ဇာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသင်ချင်တယ်သေချာအောင်ကျနော်တို့မလုပ္ခ်င္ရင္ေအားဖြင့်မည်သည့်ပလက်ဖောင်း။ အ antifragility၏အရွယ်ရောက်ပြီးမိုဘိုင်းဂိမ်းများကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပျော်ရွှင်ကြောင်း–အထူးသဖြင့်ကတည်းကအတူ WebGL စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်သေချာစေရန်အလွန်ကြီးစွာသောအရည်အသွေးနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံ။ ကျနော်တို့အကြောင်းစဉ်းစား၏အနာဂတ်ဂိမ်းအွန်လိုင်းဖြစ်သွားမှတဆင့်–အထူးသဖြင့်ဆိုရင်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူအန္းသို့မဟုတ် iPhone။, ပါကစကစားနိုင်ပါတယ်အရွယ်ရောက်ပြီးမိုဘိုင်းဂိမ်းတဆင့်သင့်တက်ဘလက်သို့မဟုတ်အပေါ်သင့်ရဲ့အဓိကကွန်ပျူတာသင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ပေမဲ့သဘာဝကျကျ၊အဆိုပါဂိမ်းအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဒီဇိုင်းနှင့်အတူမိုဘိုင်းအတွက်စိတ်!
ကျွန်တော်တို့မလိုချင်ကြဘူးရှိသည်ဖို့တက်လက်မှတ်ထိုးလူမှာပြီးတော့သာလက်လှမ်းရှိသည်ဖို့စုံတွဲတစ်တွဲများ:အဘယ်ကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးမိုဘိုင်းဂိမ်းများအဆင္ေပေါ်မှာထိုင် ၆၆ ခေါင်းစဉ်နှင့်၎င်းအသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းလံုး ၃ ရက်သတ္တပတ်။ ဒါဟာတော်တော်လေးလျင်မြန်စွာသံသရာ၊ငါတို့မူကား၊ယုံကြည်ဖုံးအုပ်အဖြစ်အများအပြား niches တတ်နိုင်သမျှရတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်လူတိုင်းအတွက်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မျှမအမှတ်ရှိတယ်မှုတ်ဖို့ကြိုးစားသင်၏ဝန်ကိုခွဲပေးပါထုတ်လုပ်၊ဒါကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးမိုဘိုင်းဂိမ်းများပေးရမယ့်သင်၏မုန့်နှံပြီးတော့အချို့။ ကျနော်တို့ရရှိပါသည်၊စအိုလိင်၊Latinas၊အုပ်စုတစ်စုလိင်၊လိင်တူချစ်သူပျော်စရာ၊အသနားခံလာျပီးမစစ္ေခြားအရာအားလုံးအကြား၌။, မည်သို့ပင်သင့်ရဲ့တိကျတဲ့လိုနှင့်အလိုဆန္ဒ၊ကျွှန်တော်သေချာအောင်သူမည်သူမဆိုအတူပါလာဖို့အရွယ်ရောက်ပြီးမိုဘိုင်းဂိမ်းများထက်ပိုသည်အများ၏စောင့်ရှောက်မှုယူ။ သင့်ရဲ့အစည်းအဝေးမှာဖြစ်ငှေ့မြားသော၊ယုတ်နှင့်အထက်တခြားအရာအားလုံး၊ပျော်စရာ။ ထွက်ခုတ်ဖြတ်၏အဓိပ္ပါယ်သင်များသောအားဖြင့်ရတက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းအားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးမိုဘိုင်းဂိမ်းများ–လိမ့်မယ်၊သီပါးအချိန်မအတွက်မှာအားလုံးသင်မြင်သောအခါအျဖင့္ကြီးဖုန်းဂိမ်းများပြီဖြစ်ကြောင်းပို့ဆောင်စေဖို့သင်အဆီအခွံမာသီး။ စီအန္းနဲ့ iPhone ထုတ်ကုန်များ၊အပေါင်းအခြားမည်သူမဆိုရဲ့အနိုင်အပြေးအရာက္ဇာအားဖြင့်သမျှအသုံးနေတယ်!
သူငယ်ချင်းတွေ–အဖြစ်အများကြီးငါကဲ့သို့ဆက်လက်ပြောပြကြောင်းအရှိန်အရွယ်ရောက်ပြီးမိုဘိုင်းဂိမ်းများနှင့်အရာအားလုံးကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိပါတယ်၊ကျွန်မအထင်ဒါဟာဖြစ်နိုင်မယ့်အချိန်အကြောင်းပးသည္စုဆောင်းမှု၏ခေါင်းစဉ်သင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရဲ့ဖြစ်စေမ။ သတိရလက်လှမ်းဒီအမှတဆင့်လုံးဝသင့်၊အဘယ်သူမျှမအနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဒေါင်းလုပ်နှင့်ထက်ပိုအရေးကြီးကြောင်း၊အဘယ်သူမျှမဗိုင်းရပ်စ်များ! ကျနော်တို့မည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်များကိုသဘောပေါက်နားလည်ပေးချင်–နှစ်ဦးစလုံးအကောင်းနှင့်အဆိုး–ကတည်းကကျနော်တို့သာရကောင်းရင်ပေါ်မယ့်အရာကိုသိ၏စိတ်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းကစား။, သင်သည်သင်၏တာဝန်ခံမှာတန်ဖိုးနှင့်သဘောပေါက်ကျေးဇူးပြုသောအရွယ်ရောက်ပြီးမိုဘိုင်းဂိမ်းများလိမ့်မည်ယူသမျှအတိုင်းပြုစောင့်ရှောက်ဖို့အ punters။ သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးယခု–ဒါဟာထက်လျော့နည်းကြာ ၆၀ စက္ကန့်–များနှင့်ဆုလာဘ်အသီးအနှံကိုရိတ်၏အတန်းအစားအုပ်စုသူများ၊အနုပညာရှင်များနှင့်ဂိမ်းနိူးချင်သောစောင့်ရှောက်ဖို့သင်ချိတ်ဆက်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်လူအားလူသိများ။ စာဖတ်ခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်–ယခုသွားမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်အရွယ်ရောက်ပြီးမိုဘိုင်းဂိမ်းများအခုချက်ချင်း!